एक वर्षभित्रै टुट्यो यो सेलिब्रिटी जोडीको सम्बन्ध, २०१८ को डिसेम्बरमा गरेका थिए विवाह – Nepal's No. 1 Digital Newspaper, Business News, Tourism News, Sports News, Entertainment News, Tourism Year 2020, digitalkhabar.com …express media network
Home / मनोरन्जन / हलिउड / एक वर्षभित्रै टुट्यो यो सेलिब्रिटी जोडीको सम्बन्ध, २०१८ को डिसेम्बरमा गरेका थिए विवाह
एक वर्षभित्रै टुट्यो यो सेलिब्रिटी जोडीको सम्बन्ध, २०१८ को डिसेम्बरमा गरेका थिए विवाह
By Digital Khabar on २७ श्रावण २०७६, सोमबार ०५:२०
हलिउडका सबैभन्दा ‘हट एण्ड ह्यापनिङ’ जोडीमध्ये एक माइली साइरस र नायक लिएम हेम्सवर्थले विवाहको एक वर्षभित्रै अलग्गिने निर्णय गरेका छन् । एक अमेरिकी रिपोर्ट अनुसार दुबैले आपसी सहमतीमा अलग्गिने निर्णय गरेका हुन् किनभने यी दुई आफ्नो ध्यान करियरमा केन्द्रीत गर्न चाहन्छन् । स्मरण रहोस्, माइली र लिएमको विवाह सन् २०१८ को डिसेम्बरमा भएको थियो । विवाह अघि यी दुईले विगत १० वर्षदेखि एक अर्कालाई चिन्दथे ।
साइरसका प्रतिनिधीले पिपल डट कमलाई भनेका छन्, ‘यतिबेला लिएम र माइली एकअर्कासँग अलग्गिने बारे सहमत भएका छन् । दुबैले आफूलाई र आफ्नो करियरमाथि ध्यान दिन चाहन्छन् । यद्यपि, यी दुई आफ्ना जनावरका राम्रा आमा–बुवा बनेर बस्नेछन् । कृपया उनीहरुको यो प्रक्रिया र निजताको सम्मान गर्नुहोस् ।’
स्मरण रहोस्, माइली साइरस सोसल नेटवर्किङ साइट इन्स्टाग्राममा निकै एक्टिभ हुन्छिन् । उनी आजकाल आफ्ना नयाँ फोटो र भिडियो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा सेयर गरिरहन्छिन् । माइली साइरस अमेरिकाकी चर्चित गायिका हुन् र उनको प्रस्तुतीको भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल भइरहन्छन् ।
← Previous Story राजकुमार–राजकुमारी चाहियो
Next Story → क्यानडेली चर्चित गायिका सेलिन डियोनको नीजि विमान दुर्घटनामा मृत्यु ? यस्तो छ वास्तविकता